Goodax: Naftu nama gaarsiineyso in isbedel dalka ka dhaco bisha August – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xildhibaan C/llaahi Goodax Barre oo xilal wasiirnimo kasoo qabtay dalka oo shalay ka hadlay kulankii baarlamaanka ee wasiir Aminigu oo kasoo qeybgalay ayaa sheegay iney adagtahay in si nabad ah lagu gaaro bisha August 2016, xilligaasoo la qorsheeyey in Soomaaliya laga qabto doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne.
Xildhibaan Goodax ayaa sheegay in tan iyo bishii June ee sanadkii hore ee 2015 ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM dib uga soo gurteen deegaano badan oo ay gacanta ku hayeen, dagaalkuna soo gaaray degmada Afgooye.
“Bishii June ilaa hadda waxey ciidamadu soo banneeyeen aagag aad muhiim u ah jiritaanka Amniga Soomaaliya, sida Toora-toorow, Kuntuwaarrey, Qoryooley, Leego, Balli-doogle Wanla-weyn aaggooda, Jannaale, Buufow, Shalaambood, Marka, Afgooyana maalin dhaweyd ayaa lasoo weeraray, waxaa culeys saaran yahay Jalalaqsi, Buulo Barde, Mahadaay, Jowhar iyo Afgooye” ayuu Xildhibaan C/llaahi Goodax Barre.
Goodax ayaa sheegay in caasimadda Soomaaliya ee Mqudisho ay ku socdaan weerarro Alshabaab geysanayaan oo isugu jira dilal, qaraxyo, iyo hoobiyeyaal.
“Waxaa weerar ku socdaa magaalada Xamar, waxaa warbixinta ku heynaa bishii June ilaa hadda in Muqdisho ay ka dhaceen 64 qarax, dil fara badanna uu ka dhacay, hoobiyeyaalna lagu soo weeraray” ayuu sidoo kale yiri Goodax.
Xildhibaanka ayaa si kulul u sheegay inuusan muuqan amni lagu gaari bisha August 2016.
“Aniga iima muuqato sasaan amni ee lagu gaari karo August, yaanan been isu sheegin, nooma muuqato inaan gaari karno inuu bisha August is-bedel ka dhaco waddankaan, maba gaareynaba, naftu nama gaarsiineyso” ayuu sidoo kale yiri Goodax.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa dhowr jeer waxaa baarlamaanka Soomaaliya u yeeray wasiirka Amniga C/risaaq Maxamed Cumar iyo taliyaasha Nabadsugidda C/raxmaan Tuuryare iyo Booliska Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, hase ahaatee wasriika oo kaliya ayaa shalay tegay baarlamaanka, iyadoo labada taliyana ay baaqdeen.
Baarlamaanka ayaa doonaya inuu su’aalo ka weydiiyo wasiirka iyo saraakiisha xaaladda ammaan ee sii xumaaneysa ee dalka, waxaana baarlamaanku aad uga carrooday meermeerka saraakiishaas.